Waxaa lagu sameeyay talo soo jeedinta lataliyaha caanka ah ee Michel Rolland, tani waa hodan, buuxa, qurux qurux badan.
Cufan, miro guduud mugdi ah, iyo qoraalada shukulaatada iyo udgoonku waxay sumaddan Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot iyo Syrah isku daraan khamri xiisa badan oo aan caadi ahayn.
Halyeeygan reer Argentine ee casaanka ah waxaa loo sameeyay qaab casri ah lataliyaha khamriga ee caanka ah ee reer France, Michel Rolland, oo qeyb ka ah milkiilaha Clos de Los Siete. Si aad u wanaagsan ayey isu dhigtaa hilibka hodanka ah.
Clos de los Siete waa natiijada mashruuca ay sameeyeen koox ka mid ah kooxaha khamriga ee Faransiiska. Waxay ku taalaa cagta cagta u dhexaysa buurta Andes, oo ku taal bartamaha dooxada Uco, degmada Vista Flores, Tunuyán. Beeraha canabku waxay ku fidaan 850 hektar (2100 acres) oo dherer ah 1,000-1,200 mitir oo ka sarreysa heerka badda.
Beerta canta ee loo yaqaan 'Clos de los Siete' waxay ku taal sagxadda buuraha Andes ee dalka Argentina. Casaankan casriga ah waxaa lagu sameeyay qaab casri ah lataliyaha khamriga Faransiiska ee caanka ah, Michel Rolland, oo qeyb ka ah milkiilaha Clos de los Siete. Tani waxay soo bandhigaysaa iskudhafka kala duwan ee Malbec, oo leh 54% Malbec, 18% Merlot, 13% Cabernet Sauvignon, 8% Syrah, 4% Cabernet Franc iyo 3% Petit Verdot, oo ku farxay bohoquetkeeda macaan, adag.
Intii lagu guda jiray goosashada, xaaladaha wanaagsan ayaa hubiyay heerar wanaagsan oo sonkor ah iyo aashito ku urursan canab, taas oo keentay in qurux badan, miro si fiican isugu miisaaman. Goos goosadani waxay muujineysaa ubaxnimo weyn iyo feejignaan qurux badan, taasoo muujineysa suuragalnimada da'da weyn.
Muuqaalka buluuga ah wuxuu soo bandhigayaa macaan qalaad, khamri khiyaano leh, oo aan si fudud loo adkeyn karin, oo lagu xasuusto cufan, miro guduud, oo leh qoraallo shukulaato, udgoon iyo caraf udgoon cusub. Dhanka daarta, khamrigu wuxuu la yaaban yahay quruxdeeda, dunta udgoon iyo dabeecadda qurxoon, oo ay kujirto liidashada quruxda badan. Waxay udgoonku udgoon dheer yihiin, dhererkiisu wanaagsan yahay waxay kudhacayaan udgoon ka badan miraha waxayna ka tarjumayaan waxyaabaha Cabernet Franc ee iskujira.